Khadadka Dhulku Oktoobar waa diyaar - Geofumadas
Land Lines Oktoobar waa diyaar
Nofeembar, 2012 cadastre, Baridda CAD / GIS
Arrinta Oktoobar ee joornaalka rubuc-2012 Dhuumaha dhulka (vol 24, ma ahan 4) ayaa diyaar ah oo loogu soo dejisto si bilaash ah websaydhka Machadka Lincoln.
Maqaallada lagu soo koobay waxay baarayaan arrimaha soo socda ee la xiriira isticmaalka dhulka iyo siyaasadda cashuuraha:
Kharashaadka howlgabka dhaxalka iyo dhaqaalaha dowladda hoose
Waxa Qoray Richard F. Dye iyo Tracy M. Gordon
Maqaalka wuxuu qaadanayaa ansaxnimo xiisa leh, waqtiyadan marka ay dalalku dalbanayaan in awoodda baahinta awoodda baahinta laga helo heerka dhexe, halka maamulka maxalliga looga baahan yahay in ay ku takhasusaan arrimaha ay ka mid yihiin awoodda deynta.
Markaa hawlgabyada dawlada hoose waxay haysataa maalgalin hoose sababtoo ah inbadan oo kamid ah dowladahan ayaan haynin lacag ku filan sanad walbo si ay u daboolaan deymaha la soo saaray. Xaqiiqdii, dowladuhu waxay hadda dalbanayaan amaah ay ku bixiyaan adeegyada joogtada ah ee shaqaalaha ayna culayska ku wareejiyaan canshuur bixiyeyaasha mustaqbalka.
Ugudambeyntii, markii gobolku uusan haynin wax lacag ah, wuxuu ku wareejiyaa dammaanad taasoo degmooyinka aysan ka helin waxay sameyn lahaayeen ... xaalado badana waxay ku dhawaad ​​wareegeen wareejinta.
Ilaalinta hal abuurka: Muujinta wadada mustaqbalka
Waxa Qoray Bob Bendick
Caqabadda ilaalinta ee imaanaysa, kana soo horjeedda dhammaan waxyaabaha jira iyo haddii aan jeclahay iyo haddii kaleba, waa in la abuuro mustaqbal faa'iido u leh dadka, kuna saleysan ixtiraamka iyo fahamka qiyamka kaladuwan ee dabeecadaha meelo badan oo badan. Mareykanka
Isbedelada isticmaalka dhulka iyo kobaca dhaqaalaha Shiinaha
Canfei He, Zhiji Huang iyo Weikai Wang
Tan iyo markii la hirgaliyay dibuheshiisiinteeda dhaqaalaha, Shiinaha wuxuu raacay hannaan koritaan oo ku saleysan kheyraadka degdegga ah, kaas oo dhulku matalayo door muhiim ah joogtaynta koboca dhaqaalaha dhaqsaha badan. Shiinaha, carrada ma aha oo kaliya natiijada kobaca dhaqaalaha, laakiin sidoo kale waa sababta waditaanka.
Gudbinta, lambarku wuxuu kaloo soo bandhigayaa waxyaabo kale, oo buugga cusubi ka dhex muuqdo: Waxaa loo sameeyay socodka: Cufnaanta iyo qaabka xaafadda.
Halkan ka soo dejiso majaladda
Post Previous«Previous Waa maxay Bentley iyo Trimble ilaa?
Post Next 5 Waxyaalaha Muhiimka ah ee Lagu Saarayo 2012Next »